ओले गुनार म्यानचेष्टर युनाइटेडको अन्तरिम म्यानेजरमा नियुक्त – Khel Dainik
ओले गुनार म्यानचेष्टर युनाइटेडको अन्तरिम म्यानेजरमा नियुक्त
एजेन्सी । इङलिस जायन्ट म्यानचेष्टर युनाइटेडले आफ्ना ओले गुनार सोल्सायरलाई क्लबको नयाँ अन्तरिम म्यानेजरका रुपमा नियुक्त गरेको छ । मंगलबार मात्र पोर्चुगिज प्रशिक्षक जोसे मौरिन्होलाई बर्खास्त गरेपछि युनाइटेडले यस सिजनका लागि अन्तरिम प्रशिक्षकको खोजी कार्य तिव्र पारेको थियो ।
म्याानचेष्टर युनाइटेड कै पूर्व खेलाडी समेत रहेका ४५ सोल्सायरले खेलाडीका रुपमा ११ सिजन ओल्ड ट्राफोर्डमा बिताएका थिए । सन् १९९९ मा म्यानचेष्टर युनाइटेडले च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्दा उनले फाइनलमा निर्णायक गोल समेत गरेका थिए ।
सोल्सायरले हालै नर्वेजियन क्लब मोल्डेसँग नयाँ सम्झौता गरेका थिए । हाल प्रिमियर लिगको छैठौं स्थानमा रहेको म्यानचेष्टर युनाइटेडलाई माथिल्लो स्थानमा लैजाने र क्लबको प्रदर्शन सुधार्ने मुख्य जिम्मेवारी यी नर्वेजियन म्यानेजरमाथि हुनेछ । उनको सहायकका रुपमा माइकल क्यारिक र किरन म्याककेन्ना नै रहनेछन् ।
Ole Gunnar Solskjaer has been appointed interim manager of #mufc.
But can you name the team he won the Champions League with in 1999?
Try our quiz: https://t.co/G7KI6TrZ3i pic.twitter.com/FMi7yjEMfq
सोल्सायरले यसअघि सन् २०१४ मा कार्डिफ सिटीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । यद्यपि कार्डिफ सोही बर्ष प्रिमियर लिगबाट रेलिगेशनमा परेको थियो । रोचक कुरा त उनको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा म्यानचेष्टर युनाइटेडले पहिलो खेलका रुपमा प्रिमियर लिगमा शनिबार कार्डिफसँगै खेल्दैछ ।
रेड डेभिल्सको अन्तरिम म्यानेजरका रुपमा नियुक्त भएपछि सोल्सायरले भने “म्यानचेष्टर युनाइटेड सधै मेरो मनमा छ, फेरि यहाँ यो भूमिकामा फर्किनु निकै उत्कृष्ट हो ।” चर्चित बीबीसीका अनुसार क्लबले यस सिजनको अन्त्यपछि स्थायी म्यानेजरको नियुक्ती गर्ने बताइएको छ ।
← मेसीलाई किर्तिमानी पाँचौंपटक गोल्डेन बुट अवार्ड बार्सिलोनाका मिडफिल्डर राफिन्हालाई एडिडासले भन्यो “जुत्ता लगाउ वा जरिवाना तिर →